Tag: ígwé ojii Mgbakọ | Martech Zone
Tag: ígwé ojii Mgbakọ
Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ, ọ tụrụ m n'anya na ọtụtụ ndị na-akwado usoro ha na Amazon Web Services (AWS). Netflix, Reddit, AOL, na Pinterest na-agba ọsọ ugbu a na ọrụ Amazon. Ọbụna GoDaddy na-ebugharị ọtụtụ akụrụngwa ya ebe ahụ. Igodo nke ewu ewu bụ njikọ nke nnweta dị elu na ọnụ ala. Dịka ọmụmaatụ, a na-ahazi Amazon S3 iji nyefee nnweta 99.999999999%, na-eje ozi ọtụtụ puku ijeri ihe n'ụwa niile. Amazon bụ onye ama ama maka ọnụ ahịa iwe ya
Oge Dijitalụ Na-agbanwe Agbanwe Ihe Nile
Tọzdee, Disemba 11, 2014 Tọzdee, Disemba 11, 2014 Douglas Karr
Mgbe m na-agwa ndị ọrụ na-eto eto okwu ugbu a, ọ na-awụ akpata oyi n’echiche na ha anaghị echeta oge anyị na-enweghị Internetntanetị. Ọbụna ụfọdụ anaghị echeta oge na-enweghị ekwentị. Echiche ha banyere teknụzụ bụ na ọ na-aga n'ihu n'ihu. Anyị na-na nwere ọtụtụ iri afọ nke oge m ndụ ebe technology ọganihu biri settled ma nke ahụ bụ agaghịkwa ikpe. M na-echeta o doro anya na-arụ ọrụ na 1 afọ, 5 afọ na 10 afọ
'Ve tinyela mgbalị dị ukwuu na saịtị azụmahịa gị ma ọ bụ blọọgụ ụlọ ọrụ, oge eruola ka ị gee ya. Anyị dere Nhazi blọgụ maka Dummies iji nyere ndị azụmaahịa aka ịkwado ịde blọgụ iji wuo ikike ma nweta ndu n'ịntanetị. Agbanyeghi na akwukwo a lekwasiri anya na ntaneti na ịde blọgụ, ihe omuma a na-agbatị na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ruo na peeji nke ịkwụ ụgwọ. Ọtụtụ n’ime unu amalitela ịgụ akwụkwọ a na nzaghachi a